Shiinaha PVC-ga soo-saareyaasha saxanka darbiga dibadda iyo alaab-qeybiyeyaasha | Longjie
GUDAHA VINYL & KOOBKA
Carada PVC ee darbiga banaanka ah waa cusbooneysiinta qalabka qurxinta dhismaha, PVC Saxanka Dibada ee banaanka ah ayaa noqon doona qalabka ugu fiican ee loogu talagalay rinjiga derbiga dibedda iyo dhoobada dhoobada ah. PVC Saxanka Bannaanka Dalbadda Dibadda waxaa laga sameeyay PVC (PVC), kaas oo ku habboon noocyo badan oo qaababka dhismaha ah, sida villa, aagga la deggan yahay, aqoon isweydaarsiga iyo dhismaha hore. Khadka toosan ee PVC ee darbiga bannaanka sudhan, mid kooban oo dhalaalaya, aad u casri ah, lehna iska caabin cimilo heer sare ah. PVC saxanka darbiga dibedda ka laadlaada si dhismuhu u yahay mid fudud oo dabiici ah oo qurux badan, wuxuu iska caabin karaa dhammaan noocyada cimilada xun iyo daxalka u adkaysta, way fududahay in la rakibo. Hadday ahaan lahayd wax soo saar ama hanaan wax soo saar .Qurux ahaan, deegaanku ma aha mid wasakhaysan, iyo isticmaalka la cusboonaysiin karo, ayaa ah agab qurxinta deegaanka ku habboon.
PVC Faa'iidooyinka Fidiyaha Darbiga Dibadda
1. PVC muuqaalka saxanka dusha ka laalaada ee naqshada naqshadeynta qoryaha, oo leh qurux dabiici ah oo fudud, noocyo kala duwan oo midabbo kala duwan ah iyo naqshad qaabeed. Taxanaha saxanka darbiga ah ee darbiga ka laadlaada PVC waa lagu qasi karaa, sidoo kale waxaa lagu dari karaa qalabka kale ee qurxinta qurxinta tayada leh, qaabab kala duwan oo ka mid ah qalabka sida dhaqanka dhagaxa, leben qurxinta, oo loo isticmaalo qaybo kala duwan, mala awaal ah, qaab isku dhafan oo la beddeli karo, si looga tago raaxaysi muuqaal oo qoto dheer .
2. Gabowga kahortaga, iska caabinta cimiladu aad u wanaagsan tahay, nolosha dheer ee PVC saxanka darbiga banaanka la sudho ee waxtarka leh ee anti-ultraviolet xasilinta oo ka kooban isku dhaf gaar ah, gabowga, shucaaca anti ayaa iska caabin kara dhammaan noocyada cimilada xun, noocyo kala duwan Saameynta cimilada dabiiciga ah muddo dheer ayey qaadan kartaa sida mid cusub, oo ka hortageysa daadinta xoqida gawaarida, dib u cusbooneysiinta markale iyo dhibaatooyinka kale, ka dhig dayactirkaaga hal mar iyo dhammaanba, nolosha illaa 30 sano ee kor ku xusan.
3. sifooyin jireed oo aad u fiican iyo sifooyin kiimikaad oo ah saxanka PVC ee darbiga banaanka ee adag oo adag, iska caabin sare oo ku saabsan saameynta naxdinta dibedda, waxay ku saleysnaan kartaa naqshadeynta injineernimada kala duwan iyo shuruudaha habraaca goynta aan loo aabo yeelin, foorarsiga qaabka isbeddelka, ma jeexjeexi doono, ma fududa in la xoqo, aashitada iyo nabaad-guurka alkali iyo nabaad-guurka uumiga biyaha, kuleylka kuleylka oo hooseeya, is-deminta ololka, ayaa si wax ku ool ah u daahi kara faafidda dabka.
4 Rakibaadda Fudud, keydinta tamarta wanaagsan, faa'iidooyinka dhammaystiran ee sare Nidaamka rakibida darbiga dariiqa fudud oo deg deg ah, hawlgal buuxa oo qallalan, adag oo lagu kalsoonaan karo, waqtiga iyo shaqada badbaadinta, soo gaabiyo muddada dhismaha, aadna u yareynaya kharashka rakibidda Saxan sudhida dahaarka gudaha wuxuu noqon karaa mid aad u fudud in lagu rakibo walxaha dahaarka darbiga, sidaa darteed saameynta dahaadhka derbiga dibedda ayaa ah mid aad u fiican. Gaar ahaan ku habboon isbeddelka darbigii hore, iyadoon loo eegin derbigii hore inuu yahay leben ama rinji, wuxuu si toos ah ugu jiri karaa dhismaha derbi hore.
Wax soo saarka ku jira habka wax soo saarka ama ku shaqeynta injineernimada deegaanka ma ahan mid sababa wasakheyn, iyo adeegsiga la cusboonaysiin karo, waa agab qurxinta ilaalinta deegaanka oo ku habboon.
◇ Nooca saxanka iyo baakadaha:
Pattern Qaabkan: saxanka sudhan ee reer Yurub,
Length Dherer saxankan dhererkiisu yahay: 4 mitir oo dherer ah.
Isticmaal: saqafka qurxinta darbiga iyo qurxinta saqafka qalabka ugu muhiimsan: bilowga, J-bar, aamus, sadarka geeska dibedda iyo safka geeska, sabuuradda geeska, iwm.
◇ Dhammaan lifaaqyada kor ku xusan adoo adeegsanaya rakibaadda oo aad ugu habboon, muuqaalka isku-duwidda, iyo isgoysku wuxuu leeyahay kala duwanaansho ballaadhan oo ballaadhin iyo foosha
Nidaamka Soo-saarista ee Plate-ka Daldalaadda Bannaanka PVC
Hore: Xayndaabka Faraska Fudud ee PVC
Xiga: Ahama Steel Solar Path Light (2-Xidhmada)